तपाईका आफ्नै यस्ता गल्तीहरुले भुँडी बढिरहेको छ ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/तपाईका आफ्नै यस्ता गल्तीहरुले भुँडी बढिरहेको छ !
तपाईका आफ्नै यस्ता गल्तीहरुले भुँडी बढिरहेको छ !
जसले डाइटिङको माध्यमबाट शरीरको तौल घटाउन खोजिरहेको हुन्छ उसले जीवनशैलीमा ध्यान निदिँदा उल्टै वजन बढाउँछन् । खासगरी डाइटिङकका नाममा भोकै बस्ने र कुनै बेला अनियमित तरिकाले धेरै खाने भयो भने शरीरमा वजन वृद्धी हुन्छ ।
जिल्ला अस्पताल बाजुराको आइसोलेसनमा २ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ ।
सम्बन्ध टु’ट्याे ? भा’वुक भएर बेलुका सात देखि १० बजेसम्म यसरी रु’नुस्, चमत्कारै हुने गरी घट्नेछ ह्वात्तै ताैल !